Glosarium famokarana | Torolàlana ho an'ny fepetra indostrialy - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Makà teny nindramina
Hamafana ny prototyping
Manamboatra volavola ambany
Elektronika ho an'ny mpanjifa
Fampivoarana ny vokatra
RESOURCES / Glossary
Betsaka ny teny indostrialy handamina amin'ny famokarana. Zahao ny rakibolana anay mba hamaritana haingana ny teny sy ny fanafohezana matetika ampiasaina.
Volavolan-drakitra mahazatra momba ny fifanakalozana angona CAD, mazàna amin'ny programa AutoCAD. ACIS dia fanafohezan-teny izay nijoro tamin'ny voalohany ho an'ny “Andy, Charles and Ian's System.”
Fanamboarana fanampiny, fanontana 3D
Ampiasaina matetika ny fifanakalozana, fanamboarana aditif (fanontana 3D) dia miteraka maodely CAD na scan ny zavatra iray izay averina averina, isam-paritra, ho toy ny zavatra telo-lafiny ara-batana. Ny Stereolithography, ny sivana laser mifantina, ny modeling déposition fuse ary ny laser laser mivantana dia ny sasany amin'ireo fizotran'ny aditif mahazatra.
Indraindray antsoina hoe "lavaka", dia ny antsasaky ny lasitra izay mazàna mamorona ny ivelany amin'ny ampahany kosmetika. Ny lafiny A matetika dia tsy manana faritra mihetsika ao anatiny.
Ity dia lavaka iray izay mifanitsy amin'ny axis an'ny revolisiona amin'ny ampahany mihodina, saingy tsy mila concentric amin'izany.
Singa iray amin'ny milina famolavolana tsindrona izay atsonika, voafintina ary atsindrona ao anaty rafitry ny mpihazakazaka ny pellets resin.
Mampiasa abrasives amin'ny fipoahana rivotra tsindry mba hamoronana endrika ambonin'ilay faritra.
Fantatra amin'ny anarana hoe "chamfer" ihany koa izy io.
Ny tsy fahalavorariana kosmetika izay noforonina nanindrona ny resina tao amin'ilay faritra, mazàna hita toy ny lokon'ny lokony eo amin'ny tapany vita eo am-bavahady.
Fampisehoana stud natsangana izay ampiasaina hampikambana fasteners na hanohanana ireo faritra hafa mandalo azy ireo.
Bobongolo vonjimaika na vonjimaika natao ho an'ny tanjona fanaovana ny ampahany famokarana mandra-pahatongan'ny lasitra famokarana avo lenta.
Indraindray antsoina hoe "core", dia ny antsasaky ny bobongolo izay misy ejectors, cams amin'ny lafiny ary ny singa sarotra hafa. Amin'ny lafiny kosmetika, ny lafiny B dia mazàna mamorona ny ao anatiny.
Ny fototra iorenan'ny masinina fanampiny izay misy ny ampahany. Ny haben'ny fananganana faratampony dia miankina amin'ny haben'ny lampihazo fananganana masinina. Imbetsaka ny sehatra fananganana no hametrahana faritra maro samihafa amin'ny geometry samihafa.
Endri-javatra ao amin'ny lasitra miaraka amin'ny undercut. Mba hamoahana ilay ampahany dia tsy maintsy miondrika izy na mihinjitra manodidina ilay undercut.
Volavola ampiasana solosaina.
Ampahany amin'ny bobongolo izay atosika hidina amin'ny toerany rehefa mikatona ny bobongolo, mampiasa solo-cam-actuated. Matetika, ny hetsika amin'ny lafiny dia ampiasaina hamahana ny undercut, na indraindray hamelana rindrina ivelan'ny rindrina. Rehefa misokatra ny bobongolo, ny hetsika amin'ny lafiny dia misintona miala amin'ilay ampahany, mamela ny ampahany hivoaka. Antsoina koa hoe "action-side."
Ny banga eo anelanelan'ny sisiny A sy ny sisiny B izay nofenoina hamoronana ilay ampahany namboarina. Ny ilany A amin'ny lasitra dia antsoina koa hoe lavaka.
Fantatra amin'ny anarana hoe "bevel" ihany koa izy io.
Ny hery takiana mba hitazomana ny bobongolo mba tsy hialan'ny resin mandritra ny tsindrona. Refesina amin'ny taonina, toy ny amin'ny "press press 700 ton".
Ny tsimatra ejector misy tendrony miforitra mba hitovy amin'ny tampony mivalona amin'ny ampahany.
Ampahany amin'ny bobongolo izay miditra ao anaty lavaka mba hamoronana ny atin'ny faritra loaka. Ny cores dia matetika hita eo amin'ny lafiny B amin'ny bobongolo, noho izany, ny lafiny B dia antsoina hoe fotony indraindray.
Singa iray raikitra ao anaty lasitra izay miteraka fahabangana ao amin'ilay ampahany. Matetika dia mora kokoa ny manamboatra pin pin core ho singa misaraka ary manampy azy amin'ny sisiny A na sisiny B raha ilaina izany. Indraindray ny tsimatra vy dia ampiasaina amin'ny lasitra aliminioma mba hamoronana fotony manify sy manify izay mety marefo loatra raha toa ka tsy metisy amin'ny lasitra betsaka amin'ny bobongolo.
Teny ampiasaina hilazana ny bobongolo noforonina tamin'ny antsasaky ny bobongolo A-lafiny sy ny sisiny B.
Ny fotoana ilaina hanaovana ampahany iray ao anatin'izany ny fanidiana ny bobongolo, ny tsindrona ny resina, ny fanamafisana ny ampahany, ny fanokafana ny bobongolo ary ny fanesorana ny ampahany.
Sinterera vy mivantana (DMLS)
Ny DMLS dia mampiasa rafitra laser fibre izay manintona eny ambonin'ny vovoka metaly atôma, mametaka ny vovoka ho mafy. Isaky ny sosona tsirairay, ny ravina dia manampy vovoka vaovao ary averina ny fizotrany mandra-pahatonga ny ampahany vy farany.
Miala ny làlan'ny fiparitahan'ny lasitra rehefa mihetsika lavitra ny faritra misy azy izy ireo, na rehefa misokatra ny bobongolo na rehefa mivoaka ilay ampahany.
Taper napetaka amin'ireo tarehin'ilay ampahany manakana azy ireo tsy hitovy amin'ny fihetsiky ny fanokafana ny bobongolo. Izy io dia mitazona ny ampahany tsy ho simba noho ny fikikisana rehefa esorina amin'ny lasitra ilay ampahany.
Plastika maro no mandray rano ary tsy maintsy ho maina alohan'ny famolahana tsindrona mba hahazoana antoka fa misy tarehy sy tarehy tsara tarehy.
Fandrefesana ny hamafin'ny fitaovana iray. Izy io dia refesina amin'ny refy isa manomboka amin'ny ambany (malefaka) ka hatramin'ny avo kokoa (mafy kokoa).
Fanokafana mifanaraka amin'ny tsipika fizarazaran'ilay bobongolo izay misy resin mikoriana ao an-davaka. Ny vavahady sisin'ny vavahady dia apetraka eo amin'ny sisin'ny ivelany amin'ilay ampahany.
Fanodinana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra. Fomba fanamboarana bobongolo izay afaka mamorona taolan-tehezana lava sy manify kokoa noho ny fikosoham-bary, lahatsoratra eo an-tampon'ny taolan-tehezana ary toradroa ivelany amin'ny sisiny.
Ny dingana farany amin'ny dingan'ny famolavolana tsindrona izay ny ampahany feno dia atosika avy amin'ny lasitra amin'ny alàlan'ny tsimatra na mekanisma hafa.
Pins apetraka ao amin'ny ilany B amin'ny bobongolo izay manosika ilay ampahany hivoaka amin'ny bobongolo rehefa nilamina tsara ny ampahany.
Elongation amin'ny fiatoana
Ohatrinona ny fitaovana afaka mamelatra na manova endrika alohan'ny hamakiana. Ity fananan'ny LSR ity dia mamela ny ampahany sarotra esorina amin'ny lasitra tsy ampoizina. Ohatra, ny LR 3003/50 dia manana elongation amin'ny fihenan'ny 480 isan-jato.
Fitaovana fanapahana izay ampiasaina amin'ny milina bobongolo.
Famoahana static electro. Vokatry ny herinaratra izay mety mitaky fiarovana amin'ny fampiharana sasany. Ny mari-pahaizana plastika manokana sasany dia mandeha amin'ny herinaratra na mampihena ary manampy amin'ny fisorohana ny ESD.
Volavola iray izay misy lavaka maherin'ny iray namboarina tao anaty lasitra mba hahafahan'ny faritra maro vita amin'ny zavatra mitovy noforonina tao anaty tsingerina iray. Matetika, ny lavaka tsirairay dia mamorona isa isan-karazany. Jereo koa ny “bobongolo misy lavaka maro.”
Ny tarehy miolaka izay hihaonan'ny taolan-tehezana amin'ny rindrina iray, natao hanatsarana ny fikorianan'ny fitaovana sy hanafoanana ny fifantohan'ny fihenjanana mekanika amin'ny tapany vita.
Karazana fitsaboana manokana natao ho an'ny sasany na ny tarehin'ilay ampahany. Ity fitsaboana ity dia mety miainga amin'ny famaranana malefaka sy voalamina tsara ka hatramin'ny endrika maodely be loatra izay mety hanakona ny tsy fahalavorariana eny ambonin'ny tany ary hiteraka endrika tsara kokoa na tsara kokoa.
Tapitra ny lelafo
Resina noforonina mba hanoherana ny fandoroana
Ny resina izay mivoaka ao anaty elanelana tsara eo amin'ny tsipika fizaran'ilay bobongolo mba hamoronana sosona plastika na silika vita amin'ny silipo ranoka.
Famantarana azo jerena amin'ny ampahany vita izay mampiseho ny fikorianan'ny plastika ao anaty lasitra alohan'ny fanamafisana.
Resina na famoahana famoahana bobongolo izay ankatoavina ampiasaina amin'ny fanamboarana ny faritra izay hifandray amin'ny sakafo amin'ny fampiharana azy ireo.
Modely fametrahana (FDM)
Miaraka amin'ny FDM, ny coil an'ny tariby misy fitaovana dia esorina amin'ny lohan'ny pirinty ho lasa sosona miampita tohiny izay mihamafy ho endrika telo-refy.
Ny teny mahazatra ho an'ny ampahany amin'ny bobongolo izay idiran'ny resin ao amin'ny lavaka famolavolana.
Feno vera. Izy io dia manondro resina misy kofehin'ny vera mifangaro ao. Ny resina feno vera dia matanjaka kokoa ary henjana kokoa noho ny resina tsy feno tsy mifanaraka aminy, nefa marefo koa.
Taolan-tehezana telozoro izay manamafy ny faritra toy ny rindrina mankany amin'ny gorodona na ny sefo ho amin'ny gorodona.
Vavahady tendrony mafana
Vavahady manam-pahaizana manokana izay mampiditra ny resina amin'ny tarehy eo anilan'ny lasitra. Ity karazana vavahady ity dia tsy mila mpihazakazaka na sprue.
Famaritana fifanakalozana sary voalohany. Izy io dia endrika fisie mahazatra amin'ny fifanakalozana angona CAD. Protolabs dia afaka mampiasa rakitra mavesatra na ambonin-tampon'ny IGES hamoronana faritra voavolavola.
Ny hetsika fanerena ny resina an-idina ao anaty lasitra hamolavola ny ampahany.
Ampahany amin'ny bobongolo izay napetraka maharitra aorian'ny fametahana ny lasitra, na mandritra ny fotoana fohy eo anelanelan'ny tsingerin'ny bobongolo.
Tondra-drano vokatry ny fidiran'ny resina amin'ny lasitra haingam-pandeha, izay matetika mitranga eo akaikin'ny vavahady iray.
Fantatra amin'ny anarana hoe "tsipika fanjairana" na "fantsom-pandehanana", ary rehefa misy vavahady maro dia "tsipika mandroraka" Ireo dia tsy fahalavorariana amin'ny ampahany izay mihaona sy mihaona indray ny fantson-tsakafo mampihena, izay matetika miteraka fatorana tsy feno sy / na tsipika hita maso.
Ny hatevin'ny sosona
Ny hateviny marina amin'ny sosona aditif tokana izay mety hahatratra kely ny mikrô manify. Matetika, ny faritra dia hisy sosona an'arivony.
Famolahana tsindrona tsiranoka, izay ny fizotrany ampiasaina amin'ny famolavolana ny silipo vita amin'ny silika.
Fihetsiketsehana milina toy ny fikosoham-bary ao anaty lathe izay anaovan'ny fitaovana mihodina ny fitaovana avy amin'ny tahiry. Io dia mamela ny famoronana endri-javatra toy ny fisaka, lalan-drano, slot ary lavaka axial na radial hamorona ao anaty lathe.
Sombin-javatra plastika manify be ampiasaina hampifandray faritra roa ary hitazona azy ireo miaraka navela hamoha sy hanidy azy ireo. Mila famolavolana sy fametrahana am-bavahady izy ireo. Ny fampiharana mahazatra dia ny ambony sy ny farany boaty.
Silipo vita amin'ny silikôra.
Resina izay mety ho azo ampiasaina amin'ny fampiharana ara-pitsaboana sasany.
Mitranga rehefa misy vavahady maro. Ireo dia tsy fahalavorariana amin'ny ampahany izay mihaona sy mihaona indray ny fantson-tsakafo mampihena, izay matetika miteraka fatorana tsy feno sy / na tsipika hita maso.
Metal azo antoka
Fanovana ny famolavolana ampahany izay tsy mila fanesorana metaly afa-tsy amin'ny lasitra fotsiny mba hamokarana ny geometry irina. Matetika no zava-dehibe indrindra rehefa ovaina ny endrika amam-bika aorian'ny nanamboarana ny bobongolo, satria avy eo azo ovaina ny bobongolo fa tsy milina tanteraka. Antsoina koa hoe "safe steel" izy io.
Tifitra famoahana bobongolo
Rano apetaka amin'ny lasitra ho tsifotra hanamorana ny famoahana ny ampahany avy amin'ny sisin'ny B. Matetika izy io no ampiasaina rehefa sarotra ny mamoaka ireo faritra satria mifikitra amin'ny lasitra izy ireo.
Volavola iray izay misy lavaka maherin'ny iray ao anaty lasitra hamela ampahany maromaro hamorona anaty tsingerina iray. Matetika, raha ny bobongolo dia antsoina hoe "multi-lavaka", ny lava-kazo dia mitovy isa isa. Jereo koa ny “lasitra ankohonana.”
Ny endrika farany irina ampahany; na endrika tsy mitaky fandidiana famolavolana fanampiny alohan'ny hampiasana azy.
Ny fantsom-baravarankely eo amin'ny faran'ny barika ny fametahana tsindrona izay atsofon'ny resin ao anaty sprue.
Ity dia lavaka iray izay mifangaro amin'ny axis ny revolisiona ny ampahany nivadika. Lavaka tsotra fotsiny izany amin'ny faran'ny ampahan'ny sy eo afovoany.
Fitaovana marobe lavitra ny ampahany, mazàna amin'ny faran'ny famenoana, ampifandraisin'ny fizarana manify. Ny overflow dia nampiana hanatsarana ny kalitaon'ny ampahany ary nesorina ho toy ny asa faharoa.
Ny fampiasa amin'ny fampiasana tsindry mihamitombo rehefa mampiditra ampahany mba hanerena plastika bebe kokoa ao anaty lasitra. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny ady amin'ny filentehana na hamenoana olana, fa mampitombo ihany koa ny mety hisian'ny tselatra ary mety hahatonga ilay ampahany hifikitra amin'ny lasitra.
Volana fisie raha hanakalo ny angona CAD.
Fizarana A / Fizarana B
Ny LSR dia singa roa; ireo singa ireo dia tazonina misaraka mandra-panombohan'ny dingan'ny famolavolana LSR.
Ny sisin'ny ampahany izay nisarahan'ny bobongolo.
Fampidirana bobongolo izay mitoetra ao amin'ilay ampahany nipoitra ary tsy maintsy nesorina hiala ilay ampahany ary napetraka tao anaty lasitra alohan'ny tsingerina manaraka.
PolyJet dia fizotran'ny fanontana 3D izay misy fantsona kely photopolymer misy ranoka miparitaka avy amin'ny fiaramanidina marobe mankany amin'ny lampihazo fananganana ary sitrana amin'ny sosona izay mamorona faritra elastomerika.
Voids tsy ilaina dia ampidirina amin'ny ampahany. Porosity dia afaka miseho amin'ny habe sy endrika maro avy amin'ny antony maro. Amin'ny ankapobeny, ny ampahany poria dia ho matanjaka kokoa noho ny ampahany matevina tanteraka.
Vavahady manam-pahaizana manokana izay mampiasa lavaka iray izay alalàn'ny tsimokaretina ejector mba hampiditra resina ao an-davaky ny bobongolo. Izany dia mamela ravina poste izay mazàna nohaingoina.
Masinina fanorona tsindrona.
Ity dia lavaka noforonina tamin'ny alàlan'ny fitaovana mivantana izay mitohy amin'ny axis ny revolisiona amin'ny ampahany mihodina, ary azo heverina ho lavaka amin'ny lafiny. Ny tsipika afovoan'ireto lavaka ireto dia tsy takiana mba hiampitana ny axis an'ny revolisiona.
Sisiny na vertex izay efa boribory. Matetika, io dia mitranga amin'ny géometrika ampahany satria vokatra voajanahary amin'ny dingan'ny fikolokoloana ny Protolabs. Rehefa niniana nampiana boribory ny sisiny tamin'ny ampahany iray, dia nantsoina hoe fillet izy io.
Mekanika hydraulic izay manosika ny visy handroso ao anaty barika ary manery ny resina ao anaty lasitra.
Fipetahana amin'ny ampahany plastika vokatry ny fiantraikan'ny tsimatra ejector.
Enti-milaza resin-kazo miorina amin'ny famenoana fanampiny ho tanjaka. Izy ireo dia mora voan'ny warp satria ny orient orientation dia manaraka ny tsipika mikoriana, ka miteraka fihenjanana asymmetrika. Ireo resina ireo dia mazàna mafy kokoa sy matanjaka kokoa nefa marefo kokoa (oh: tsy dia henjana).
Anarana mahazatra ho an'ny fitambaran'ny simika izay, rehefa atsindrona, dia mamorona ampahany plastika. Antsoina hoe “plastika” fotsiny indraindray.
Ny haavon'ny antsipirian'ny pirinty tratra tamin'ny ampahany namboarina tamin'ny alàlan'ny fanamboarana aditif. Ny fizotrany toy ny stereolithography sy ny laser mivantana amin'ny laser dia mamela fehin-kevitra tena tsara miaraka amin'ireo endri-javatra kely indrindra.
Fomba manify, toy ny rindrina mifanitsy amin'ny làlan'ny fanokafana ny bobongolo, mahazatra amin'ny faritra plastika ary ampiasaina hanampiana ny rindrina na ny sefo.
Fantsona iray izay mamakivaky ny resin avy eo amin'ilay sprue ka hatrany amin'ny vavahady / s. Matetika, ny mpihazakazaka dia mitovy amin'ny, ary misy ao anatiny, ny fisarahana amin'ny bobongolo.
Fitaovana iray ao anaty barika izay mametaka pellet resin hanerena sy handrendrika azy ireo alohan'ny tsindrona.
Sinter laser voafantina (SLS)
Mandritra ny fizotran'ny SLS, misy laser laser mipetaka amin'ny fandriana mafana vovoka thermoplastic, izay manala ny vovony ho matevina. Aorian'ny sosona tsirairay, ny roller dia mametraka vovoka vaovao eo ambonin'ny fandriana ary miverina ny fizotrany.
Ny hery eo anelanelan'ny sosona resin rehefa mifanosika mifanohitra na ny ambonin'ny lasitra. Ny disadisa vokatr'izany dia miteraka fanafanana ny resina.
Fizarana izay tsy nofenoina résin tanteraka, ka nahatonga endrika fohy na tsy hita.
Ny fiovana amin'ny haben'ny ampahany rehefa mangatsiaka mandritra ny fizotran'ny famolavolana. Vinavinaina hitranga arakaraky ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra fitaovana ary natsangana tao anaty famolavolana bobongolo alohan'ny famokarana.
Endri-javatra iray izay mamorona lozisialy anatiny amin'ny ampahany amin'ny alàlan'ny fampidirana ny ilany A sy ny lafiny B, fisorohana ny fikorianan'ny resina ao anaty lavaka.
Ampahany amin'ny bobongolo izay atosika hidina amin'ny toerany rehefa mikatona ny bobongolo, mampiasa solo-cam-actuated. Matetika, ny hetsika amin'ny lafiny dia ampiasaina hamahana ny undercut, na indraindray hamelana rindrina ivelan'ny rindrina. Rehefa misokatra ny bobongolo, ny hetsika amin'ny lafiny dia misintona miala amin'ilay ampahany, mamela ny ampahany hivoaka. Antsoina koa hoe "cam."
Dimples na fanodikodinana hafa eo ambonin'ny faritra satria ny faritra samihafa amin'ilay faritra dia mangatsiaka amin'ny taha hafa. Ireo dia matetika vokatry ny hatevin'ny fitaovana be loatra.
Misy tsipika tsy misy loko sy hita maso ao amin'ilay ampahany, izay matetika ateraky ny hamandoana ao amin'ny resina.
Ny dingana voalohany amin'ny rafitra fizarana resin, izay idiran'ny resin ao anaty lasitra. Ny sprue dia mifandraika amin'ireo tarehy misaraka amin'ny bobongolo ary mitondra resina ho an'ireo mihazakazaka, izay mazàna amin'ny faritra misaraka amin'ny bobongolo.
Pin-tsindrona ho an'ny famolavolana endrika-habe avo lenta, lavaka kely savaivony amin'ny ampahany. Ny paingam-by dia matanjaka mba hifehezana ny adin-tsoliky ny fivoahana ary malefaka tsara ny tampony mba hamoahana madio ilay faritra tsy misy volavola.
Steel azo antoka
Fantatra amin'ny anarana hoe "azo antoka vy" (ny teny tiana indrindra rehefa miasa amin'ny lasitra aliminioma). Izy io dia manondro ny fanovana ny famolavolana ampahany izay tsy mila fanesorana metaly afa-tsy amin'ny bobongolo mba hamokarana ny geometry irina. Matetika no zava-dehibe indrindra rehefa ovaina ny endrika amam-bika aorian'ny nanamboarana ny bobongolo, satria avy eo azo ovaina ny bobongolo fa tsy milina tanteraka.
Mijoro ho an'ny fenitra amin'ny fifanakalozana angona modely momba ny vokatra. Izy io dia endrika iraisana amin'ny fifanakalozana angona CAD.
SL dia mampiasa laser ultraviolet mifantoka amina teboka kely iray hisarihana ny faran'ny resina thermoset. Any amin'izay itarihany azy dia mivadika ho matanjaka ilay ranoka. Io dia averimberina amin'ny fizarana manify sy roa refy izay misy sosona mba hamorona faritra telo-mirefy sarotra.
Olana iray mandritra ny dingan'ny famoahana ny famolavolana, izay misy ampahany mipetaka amin'ny iray na sasany amin'ny antsasaky ny lasitra, ka manahirana ny fanesorana. Olana iraisana io rehefa tsy noforonina miaraka amina drafitra ampy ilay ampahany.
Fantatra amin'ny anarana hoe "kofehy atsimo" na "tsipika knit", ary rehefa misy vavahady maro, "tsipika mandroraka." Ireo dia tsy fahalavorariana amin'ny ampahany izay mihaona sy mihaona indray ny fantson-tsakafo mampihena, izay matetika miteraka fatorana tsy feno sy / na tsipika hita maso.
Niandany tamin'ny "STereoLithography." Izy io dia endrika mahazatra amin'ny fampitana ny data CAD amin'ny milina prototyping haingana ary tsy mety amin'ny famolavolana tsindrona.
Bobongolo iray izay tsy mampiasa afa-tsy halava roa monja mba hamoronana lava-kazo iray izay resahina ao. Amin'ny ankapobeny, io teny io dia manondro bobongolo tsy misy fihetsika hafa na fiasa manokana ampiasaina hamahana ny undercuts.
Fanokafana mifanaraka amin'ny tsipika fizarazaran'ilay bobongolo izay misy resin mikoriana ao an-davaka. Ireo dia antsoina koa hoe "vavahady an-tsisiny" ary matetika apetraka amin'ny sisin'ny ivelany amin'ilay ampahany.
Endri-javatra iray nampiana lasitra izay hesorina amin'ny ampahany aorian'ny famolavolana mba hanampy amin'ny famoronana tendrony malemy amin'ilay ampahany. Matetika izy io dia atao miaraka amin'ny fihoarana rano hanatsarana ny kalitaon'ny tapany farany.
Vavahady iray voahidy amin'ny vatan'ny lafiny iray amin'ny bobongolo mba hamoronana vavahady izay tsy mamela marika eo amin'ny tarehy ivelany amin'ilay faritra.
Mandritra ny fizotran'ny fihodinana, ny tahiry tsorakazo dia mihodina ao anaty milina lathe raha misy fitaovana mitazona ny tahiry mba hanesorana fitaovana ary hamorona faritra misy varingarina.
Ampahany amin'ny ampahany izay manaloka ampahany hafa amin'ilay ampahany, mamorona fifamatorana eo anelanelan'ny ampahany sy ny iray na ny roa amin'ireo antsasaky ny bobongolo. Ohatra iray ny lavaka mitohy amin'ny torolàlana fanokafana ny bobongolo mankaleo amin'ny ilan'ny ampahany. Ny undercut dia manakana ny ampahany tsy esorina, na ny bobongolo tsy hisokatra, na izy roa.
Kely (0,001 ka hatramin'ny 0,005 in.) Misokatra ao amin'ny lavaky ny bobongolo, mazàna eo amin'ny faritry ny fikatsoana na amin'ny alàlan'ny tionelin'ny pin ejector, izay ampiasaina hialana amin'ny rivotra avy amin'ny bobongolo iray raha ampidirina ny resina.
tsy hahitana soritra
Aorian'ny famolavolana, ny rafitra mpihazakazaka plastika (na amin'ny vavahady tendrony mafana, plastika kely kely) dia hifandray amin'ilay ampahany eo amin'ny toerana misy ny vavahady / s. Rehefa voahidy ilay mpihazakazaka (na voapaika ny dimple tendrony mafana), dia misy tsy fahalavorariana kely antsoina hoe "vestige".
Teny iray mahazatra ho an'ireo tarehin'ny ampahany lavaka. Ny tsy fitoviana amin'ny hatevin'ny rindrina dia zava-dehibe.
Ny miondrika na miondrika ampahany rehefa milamina izay vokatry ny fihenjanana satria ny ampahany samihafa amin'ilay ampahany dia milay ary mihena amin'ny taha hafa. Ny ampahany namboarina tamin'ny resins feno dia mety hikorontana ihany koa noho ny fomba fampifanarahan'ny mpameno mandritra ny fikorianan'ny resin. Matetika ny mpameno dia mihena amin'ny taha hafa noho ny resina matrix, ary ny kofehin-tsolika mifanitsy dia afaka mampiditra adin-tsaina anisotropika.
Fantatra amin'ny anarana hoe "tsipika fanjairana" na "tsipika raiki-pitia", ary rehefa misy vavahady maro dia "tsipika mandroraka." Ireo dia tsy fahalavorariana amin'ny ampahany izay mihaona sy mihaona indray ny fantson-tsakafo mampihena, izay matetika miteraka fatorana tsy feno sy / na tsipika hita maso.
Karazana maodely CAD tsy misy afa-tsy ny tsipika sy ny miolakolaka, amin'ny 2D na 3D. Ny maodelin'ny tariby dia tsy mety amin'ny famolavolana tsindrona haingana.
Torolàlana momba ny fisafidianana fitaovana
Torolàlana momba ny fifantenana teknolojia
NY SISTEM RAPIDA CREATEPROTO dia voafetra
Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana,
Misorata anarana hahazoana mpamokatra sy fanavaozana!